जीवन बीमा कम्पनीले उठाए ९४ अर्ब बीमा शुल्क, असारमै उठ्यो ३४ अर्ब ४८ करोड, कसको कति ?| Corporate Nepal
जीवन बीमा कम्पनीले उठाए ९४ अर्ब बीमा शुल्क, असारमै उठ्यो ३४ अर्ब ४८ करोड, कसको कति ?
साउन ७, २०७७ बुधबार १८:४५
काठमाडौं । १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा ९४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका हुन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले असार महिनामै २४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएका हुन् । गत वर्ष मात्रै कम्पनीहरुले नयाँ बीमा पोलिसी बेचेर ३४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् ।
पुराना बीमा पोलिसी नविरकण गरेर ५७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठाएका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार बीमा शुल्क वापत एक अर्ब ९३ करोड संकलन गरेका छन् । हालसम्म ७९ लाख ५७ हजार ३ सय ५८ वटा बीमा लेख जारी भएका छन् ।
कुन कम्पनीले कति उठाए बीमा शुल्क ?
सबै भन्दा धेरै बीमा शुल्क नेपाल लाइफले संकलन गरेको छ । नेपाल लाइफले २८ अर्ब ३९ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ जसमध्ये १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नयाँ पोलिसी बेचे वापत संकलन भएको हो । दोश्रो नम्बरमा रहेको एलआइसी नेपालले १५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सो रकममध्ये ४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ नयाँ पोलिसी बेचेर संकलन भएको हो ।
नेशनल लाइफले ९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठाएको छ । सोमध्ये २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नयाँ पोलिसी बेचेर आर्जन भएको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ७ अर्ब ६ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ जसमध्ये ९२ करोड रुपैयाँ भने नयाँ पोलिसी बिक्रि वापत संकलन भएको हो । युनियन लाइफले ४ अर्ब ८० करोड बीमा शुल्क आर्जन गर्दा २ अर्ब ८६ करोड बराबरको नयाँ पोलिसी बेचेको छ । एसियन लाइफले ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । जसमध्ये एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नयाँ पोलिसी बेचेर आर्जन गरेको हो ।
मेटलाइफले ४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्दा प्रथम बीमा शुल्क एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ ।
प्राइम लाइफले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्दा एक अर्ब १९ करोड प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सुर्या लाइफले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क उठाउँदा एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क संकलन गरेको हो ।
गुराँस लाइफले गत वर्ष २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएको छ । जसमध्ये ७८ करोड प्रथम बीमा शुल्क रहेको छ । सिटिजन लाइफले एक अर्ब ९६ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सोमध्ये एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क छ । ज्योति लाइफले एक अर्ब ८९ करोड बीमा शुल्क आर्जन गर्दा एक अर्ब २३ करोड प्रथम बीमा शुल्क छ ।
रिलायबल लाइफले एक अर्ब ६० करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । सोमध्ये एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ प्रथम बीमा शुल्क हो । रिलायन्स लाइफले पनि एक अर्ब ४० करोड प्रिमियम उठाउँदा प्रथम शुल्क ९१ करोड उठाएको छ । आइएमई लाइफले एक अर्ब ४० करोड बीमा शुल्क उठाउँदा ७८ करोड प्रथम बीमा शुल्क छ । प्रभु लाइफले एक अर्ब १८ करोड बीमा शुल्क उठाउँदा ८९ करोड प्रथम शुल्क छ । महालक्ष्मी लाइफले ८७ करोड बीमा शुल्क उठाउँदा ८० करोड प्रथम बीमा शुल्क छ । सानिमा लाइफले ८२ करोड बीमा शुल्क उठाएको छ जसमध्ये ५५ करोड प्रथम बीमा शुल्क हो ।
बीमा कम्पनीले सरकारी कर्मचारीलाई बोलाए कोरोना बीमा गर्न
कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी नदिन बहाना सुरु
नेपाल इन्स्योरेन्सको डेपुटी सीईओमा पोखरेल नियुक्त, डेपुटी जीएममा बस्नेत
कवि फुँयालको काँधमा आइएमई लाइफको जिम्मेवारी, १३ वर्षकै करिअरमा सीईओ